Ejipta: Malaza any amin’ny aterineto ireo vehivavy mpitokona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Febroary 2011 7:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, polski, عربي, 繁體中文, 简体中文, Português, Español, Swahili, Italiano, Magyar, English
Nisintona ny sain'ny mpitoraka bilaogy sy ireo vaovao ao amin'ny tranokala an'ny daholobe ny anjara teran'ny vehivavy eo amin'ny fitakiana fanoherana ny fitondrana ankehitriny any Ejipta. Mampanahy ihany ny fandraisan'anjaran'ireo vehivavy ao anatin'ireo mpanohitra marobe midina an-dalambe mitaky fanovana any amin'ny firenena izay mampidi-doza ny fanoherana ny fitondrana. Zara raha misy dikany ny fandraisan'anjaran'izy ireo raha ny media mahazatra hatramin'izay no jerena.
Vehivavy mitarika ireo mpanohitra, sainam-pirenena eny an-tanany, arabe Batal Ahmed , saripika Nour El Refai, © copyright Demotix (27/1/2011)
Ao amin'ny lahatsoratra “Manana anjara toerana lehibe ny vehivavy amin'ny fanoherana misy any Ejipta“, ilay mpitoraka bilaogy Jenna Krajeski manoratra fa ny andro voalohan'ny fanoherana (25 janoary) dia nandraisan'ny vehivavy anjara ary tsy mbola nisy toy izany taloha. Ohatry ny hoe misy antoka izany ny hafanam-pon'ireo mpikarakara.
Nahoana no mandray anjara betsaka amin'ity hetsika fanoherana antsoina hoe “andron'ny fahatezerana” ity ny vehivavy, raha oharina amin'ny hetsika fanoherana ny fitondrana hatramin'izay tany Ejipta ? Tsy mpikambana amin'ny antoko mpanohitra akory ireo antokon'olona ao amin'ny facebook. Ohatra ny azo antoka kokoa ireny hetsika ireny. mampirisika ny olona foana ny mpikarakara mba hilamina. Ambonin'izay, ireo avara-pianarana any Ejipta, ny lehilahy sy ny vehivavy dia efa leo ny fitondrana tsy niova mihitsy nandritra ny fiainan'izy ireo, ary manidy ny lalana rehetra ho an'ny manam-pahaizana aza. Teo koa i Tonizia. Tampoka teo, nanao fanoherana izay narahana ahiahy ihany kanefa nahafahana nanao fanovana tanteraka .
Ny sary mihetsika eto ambany, “Ilay tovovavy mahery fo indrindra tany Ejipta” hita ao amin'ny YouTube navoakan'i iyadelbaghdadi mampiseho tovovavy iray maneho ny fanoherany ny fitondran'i Moubarak. Voasoratra amin'ny teny anglisy ny zavatra lazainy.
Ny mpanao gazetin'ny Daily Beast , Mike Gilgio manoratra fa raha fahita matetika ny vehivavy iharan'ny fanolanana mandritra ny fihetsiketsehana tahaka izao any Ejipta, tamin'ity indray mitoraka ity kosa, nanaja azy ireo ny lehilahy mandritra ny hetsika nomena anarana hoe Hetsiky ny Fahadiovana – izay heverina fa tokony hanambarana ny hery hanoherana ny fanjakana izay ambony kokoa noho ny olana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Nour El Refai miombon-kevitra amin'ny fitambaran'ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin'ny bilaoginy “Mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy mandritra ny hetsika am-pilaminana hanoherana an'i Moubaraka“. Voakasik'ity ady ity koa ny olona rehetra avy amin'ny vazan-tany efatra.
Sambany izao no nandray anjara tamina hetsika tahaka izao ny Ejiptiana rehetra avy amin'ny vazan-tany rehetra.
Tsy dia noraharahian'ny media mahazatra loatra ny herim-po ananan'ireto vehivavy ireto fa toy ny aloka ihany, araka ny voalazan'i Megan Kearns izay manoratra ao amin'ny “Nidina an-dalambe ny vehivavy : manohitra ny fitondrana miaraka amin'ny lehilahy ny vehivavy kanefa tsy aseho firy ny sariny“:
Isak'alina, tsy raharahian'ny lehilahy sy ny vehivavy ny tsy fahazoana mivoaka amin'ny alina navoakan'ny fanjakana tao Le Caire, mivory eo amin'ny kianja Tahrir, antsoina hoe koa Kianjan'ny Fahafahana ry zareo. Ny “Diaben'ny olona aman-tapitrisany” hamonjy ny lapam-panjakana no fandaharam-potoana rahampitso ary fitokonana faobe amin'ny alarobia. Milaza ny Ejiptiana fa tsy hijanona ny fitokonana raha tsy miala ny filoha Moubarak. Ary hiaro ny fahamarinana koa ny vehivavy any Ejipta. Kanefa raha tsy mampiseho ny sarin'izy ireo mandray anjara ny media dia toy ny tsy manana ny anjara toerany izy ireo amin'ity fitakiana fanavaozana an-dalambe ity; voafafan'ny tantara izany ry zareo [mpanitsy: Tamin'ny herinandro ireo].
Voalazan'ny tranokala an'ny daholobe kosa anefa ny fandraisan'anjaran'ny vehivavy, toy ny pejy ao amin'ny facebook Vehivavin'i Ejipta noforonin'i Leil-Zahra Mortada avy any Barcelone. Tamin'ny 31 janoary 2011 tamin'ny 6 ora hariva, ora ny amin'ny sisin-tany antsinanan'i Etazonia, nahitana fitahirizana sary efatra misy sary 130 ahitana vehivavy amin'ny taona rehetra, ny sasany amin'ny burqas, ny hafa amin'ny fehitenda, ary ny hafa koa manao fitafy tandrefana. Ny zavatra itovizan'izy rehetra dia ny fahatezerana sy ny fiadiana amin'ny polisy.
Maro amin'ireo sary ireo koa no hita any amin'ny fizarana sary ao amin'ny aterineto. Ao amin'ny Twitpic nifampizara tamin'ny twitter mikasika ireo sary ireo ny mpampiasa izany toa an-dry Kardala, Farrah3m arysGardinier , ary azo idirana tsara koa ny fizarana sary ao amin'i Plixi syPicasa . Ny bilaogy Subterfusex sySeilo@GeekyOgre koa mamoaka ireo sary ireo.
Mpaka sary mahaleo tena Monasosh mampiseho ny sarin'ireo vehivavy mandray anjara amin'ity hetsika ity ao amin'ny Flickr.
Vehivavy manao fihetsiketsehana –